Obodo Bocas Bocas Del Toro: Oge kacha mma ileta - ezumike Caribbean
Ihe kpatara m jiri zụta blọgụ Island
Nke kacha mma nke Bocas Del Toro Blog
Hotellọ nkwari akụ
Bocas Bali Na Akụkọ
Mpaghara Bocas del Toro
Oge kacha mma ileta
Oge kacha mma maka ezumike na Bocas del Toro, Panama
Obodo Bocas na ndị ọbịa na-eme mkpọtụ kwa afọ. Ma, n'agbanyeghị otú ọrụ n'aka, a na-enwe mgbe niile mara mma agbatị nke ọcha aja osimiri ị nwere ike inwe n'onwe gị. Ihu igwe na-ekpo ọkụ mgbe niile na Bocas Del Toro. Ọ bụ otu n'ime ebe ole na ole n'ụwa nwere naanị ihe dị ka ogo atọ nke mgbanwe na elu kwa ụbọchị maka okpomọkụ ikuku kwa afọ yana ogo anọ nke mgbanwe na okpomọkụ mmiri kwa ụbọchị kwa afọ.
A na-ewere etiti Disemba ruo Eprel dị ka oge dị elu, mana ọ naghị eche oke oke. Oge a nke afọ nwere egwu kachasị egwu, mana ị nwere ike ịhụ egwu egwu ebe na Bocas Town kwa abalị n'afọ.
Ọnwa kacha mma
Ndị obodo ahụ ga-agwa gị na Septemba na Ọktọba bụ ọnwa kacha amasị ha, mana n'ihi ihu igwe na-ekpo ọkụ na ikuku nke oke osimiri, kwa ọnwa na-adọrọ mmasị ndị ọbịa.
Shorts na T-shirt zuru ezu iji nwee ahụ iru ala n'afọ niile. Ọnụ ọgụgụ dị elu kwa ụbọchị sitere na 83°F ruo 86°F. N'abalị, okpomọkụ dị elu anaghị adịkarị n'elu 88 ° F yana n'okpuru 70 ° F. Nke a na-eme ka ụbọchị ọkụ na ọnọdụ ihi ụra dị mma.
Oke osimiri na-adị mma mgbe niile maka igwu mmiri na nkezi okpomọkụ dị n'etiti 82°F na 86°F kwa afọ. Ọ bụ ezie na nke a na-eme ka igwu mmiri dị mma, okpomọkụ nke mmiri na-ekpo ọkụ nke ukwuu maka okpuru mmiri coral anyị—nsogbu zuru ụwa ọnụ.
Ohia mmiri ozuzo gbara Bocas del Toro gburugburu, yabụ mpaghara ahụ na-enweta oke mmiri ozuzo na mkpuchi igwe ojii. Agbanyeghị, ọtụtụ ụbọchị na-ahụ ọtụtụ awa anwụ na-acha. Ogologo oge oke mmiri ozuzo dị n'etiti otu awa na otu awa na ọkara.
Site n'ikuku na-efe ọsọ na-agba ọsọ kilomita ise ruo 11 kwa elekere, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mpaghara ahụ na-enwe ikuku dị mma mgbe niile. Ifufe dị na Bocas Bali na-agbanwekarị n'ihi na ọ dị nso na mmiri mepere emepe. Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị ahụ dị mma na-ejighi ntụ oyi.
Ekwetala amụma ihu igwe dị n'ịntanetị maka Bocas del Toro ka ha na-ebu amụma mmiri ozuzo mgbe niile ọbụlagodi na ihu igwe mara mma. Akụkụ nke ihe kpatara ya: Ala Bocas del Toro dị n'akụkụ nke ọzọ nke ugwu site na Bocas Town na Bocas Bali.
The Smithsonian Tropical Research Institute na Bocas del Toro nyere ọtụtụ ozi a.
Kpọtụrụ Bocas Bali
Lelee ụlọ ahịa anyị
okomoko nkwari akụ na Costa Rica
© 2018-2022 Bocas Bali | Ikike niile echekwabara
Weebụsaịtị na foto site Laabs Creative
Amụma Bocas Bali
Ọnụ ego niile na-agụnye
Ọnụego dabere na mmadụ abụọ ma ọ bụ otu onye obibi (ọ nweghị mmadụ atọ ma ọ bụ anọ)
A naghị etinye ụtụ isi ma ọ bụrụ na edeghị ya (10% maka ụlọ na 7% maka nri na ihe ọṅụṅụ)
Ọnụnọ kacha nta
Opekempe nọrọ abalị abụọ, Opekempe nọrọ abalị anọ site na Disemba 2 ruo Jenụwarị 4
Ndị okenye naanị
Ndị okenye naanị ihe onwunwe, ọbịa ga-dịkarịa ala 16 afọ
Ọ dịghị anu ulo
Enweghị anụ ụlọ anabatara
Eji email kwadoro ndoputa niile
Achọrọ nkwụnye ego
Achọrọ nkwụnye ego 50% iji kwado ndoputa. A na-akwụ ụgwọ nguzozi na nbanye. Ọ bụrụ na emezubeghị nkwụnye ego ahụ n'ime izu abụọ nke ndoputa ahụ, ịkagbu akpaka ga-emetụta.
Bocas Bali anaghị akwụ ụgwọ kagbuo ma ọ bụ gbanwee ụgwọ ugbu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkagbu. Biko mee ka anyị mara tupu oge eruo ka enwere ike. N'ihe gbasara ịkagbu, a ga-akwụghachi nkwụnye ego 50% gị n'ime ụbọchị 30.
Iwu ịṅụ sịga
Iwu mba Panaman amachibidoro ise siga n'ebe ndị mmadụ na-anọkarị, ụlọ nri, na ụlọ mmanya. Maka nkasi obi nke ndị ọbịa ahụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere iwu na-adịghị na-ese siga na ebe a na-ahụkarị, gụnyere ọdọ mmiri, ụlọ mmanya, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ndị ọbịa na-aṅụ sịga kwesịrị ịkpọtụrụ Reception ma ha bịarutere maka ebe a họpụtara ime ya. Ị nwere ike na-aṅụ sịga na teres nke ọ bụla Villa. Enwere ụgwọ $200 maka mgbake ụlọ maka ndị na-adịghị erube isi n'iwu a.
Achọrọ enyemaka ụfọdụ?
Biko nye ozi gị na ụbọchị ndị ị na-atụ anya ịnọrọ. Anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Anyị na-akpọ gị
Daalụ maka mmasị gị na Bocas Bali. Biko nye aha gị, akara ekwentị gị, na adreesị ozi-e gị, anyị ga-akpọ gị ozugbo.